Which one is better to buy? HTC Sensation XL and iPhone 4, pls vote — MYSTERY ZILLION
Which one is better to buy? HTC Sensation XL and iPhone 4, pls vote
December 2011 edited December 2011 in Mobile
ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲတော့ မသိဘူးဗျ။ နှစ်ခုလုံးမှ မသုံးဖူးတာ
Android ကြိုက်လား ၊ IOS ကြိုက်လား ၊ ဒါပဲ ရွေးချယ်လိုက်ပေါ့။ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေတာသုံးပေါ့။
HTC Sensation XL ကတော့ Beats Audio system ပါလာတဲ့အတွက် iPhone4ထက်တော့ အသံပိုင်းမှာ ပိုကောင်းမှာ သေချာတယ်ဗျ။
i prefer HTC Sensation ... bcoz it has
Only depends on your mood. Compare that phones and choose the one you like more.
But, iOS != Android.
နှစ်ခုကို ကိုင်ကြည့်။ သုံးကြည့်ပါ။ မိမိ သဘောကျဖို့က အဓိကပါ။ Spec ကောင်းတိုင်း ကိုယ့်အကြိုက်ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာ။
Android OS is the best
နှစ်ခုစလုံးရဲ့ကောင်းချက်တွေကတော့ လန်ထွက်နေတာဘဲဗျာ HTC ကတောင် iPhone ထက်စျေးများနေသေးတယ် iPhone ရဲ့ application တွေအားလုံးကိုလည်း Andriod market မှာရနိုင်ပါတယ်၊ iPhone ရဲ့ application ကဝယ်သုံးမှအဆင်ပြေမယ့်ပုံပေါက်နေတယ် free အစမ်းပေးသုံးထားတာလေးတွေက မပြောပလောက်စရာလေးတွေပါဘဲ၊ Brand ကို crazy ဖြစ်လို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တန်ပါတယ်၊ sound system ကောင်းကောင်းနားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ original iPhone earphone ထက်စာရင်တစ်ခြား brand sound system ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့တွဲသုံးလိုက်ရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်၊ HTC က Beats audio earphone ပါပြီးသားဆိုတော့ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ ကင်မရာရုပ်ထွက်ကလဲကောင်းပါတယ်၊ နောက်ပြီး ebook တွေဖတ်ရတာလဲတော်တော်လေးအားရစရာကောင်းပါတယ်၊ iPhone ထက်အရွယ်အစားကြီးသွားတာတစ်ခုကတော့ နည်းနည်းလေး စမတ်မကျဘူးဖြစ်နေတယ်၊ အကြံပြုချက်လေးတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ...